TV ewuchungechunge "Kubi Nastya": nabalingisi izindima, indaba
Uchungechunge oluthi "Kubi Nastya" - omunye wemisebenzi TV yimpumelelo kakhulu Costumed ekuqaleni kowezi-2000. Telenovela isitshela indaba inkathi yokuchuma isiko Russian, uye kwakuqala ukwanda okukhulu ngokusiza kungenxa umbono yokuqala, omkhulu umdlalo abadlali, kanye ingoma enhle.
isithombe kaPlato Ana
Kudlala actress abadumile Elena Korikova. Waba yisaga phakathi nawo-1990, ngemva ekukhishweni indima Lisa Murom e ifilimu "iNkosikazi ku Maid". Yena wadala isithombe esikrinini uye waphumelela ukuze ngokushesha yaba omunye likufuna abadlali abaningi.
Esikhathini uchungechunge "Abampofu Nastya", abadlali kanye izindima ayisihloko yalokhu kubukezwa, umlando indaba edumile Pushkin sika liphindwe kunalokho. Uhlamvu main kwaba serf, kodwa leli qiniso wawagcina ngokucophelela imfihlo ngumnikazi wayo, okwadingeka nje yena yedwa izizathu ezithile ngabakhulisa intombazanyana njengoba intokazi zasebukhosini. Elena Korikova wadala kahle isithombe sentombazane elula, enomusa futhi bemethemba ngumuntu ukuqondana ongaziwa okwakulungiswa esimweni obungajwayelekile, okuyinto kwamlethela sokuhlupheka.
Noma kunjalo, aluthole amandla okubhekana kanye zobuningi nobunzima wakhe: silindelwe ngesibindi inkosi yakhe entsha nokhahlo, sivikele isithunzi sabo futhi ilungelo sihlonishwe phambi isikhulu Repnin. moviegoers Iningi bathandile Anna futhi sathandana nalo lokwethembeka yayo, ubuqotho namandla.
Famous umlingisi Russian uPetru Krasilov komculo ekuskrini isithombe romantic futhi ngesikhathi esifanayo abanesibindi Prince Repnin. Lokhu uhlamvu uJesu wazalwa uhlobo upholavuthondaba komngane wakhe omkhulu - Vladimir neCorfu, okuyinto ingxenye yokuqala ochungechungeni kunalokho nokhahlo ngisho ndoda enonya olungaka. Isikhulu wathandana Anna, nabangazi lutho mayelana kwaqala, kanye nokudalulwa imfihlo esabekayo kwaba buhlungu lwangempela ngaye.
Kufanele kuqashelwe ukuthi uPetru Krasilov zabhekana kangcono nalezi indima yayo: ezimbalwa ne-Anna ubuntu bakhe kwaba Akumangalisi ezithakazelisayo. kwabonakala ku-internet Misha Repnin abuzwe lonke ekhishwa imizwelo: kusukela ethembeni eliqhakazile nothando ekukhanyeni bajabha; ngemva ukungabaza sina kanye nokungabaza, wayesalokhu uthola amandla ukuba bamukele iqiniso ababayo, futhi kwaqhuma entsha ngisho wanquma Duel nomngani wakhe omkhulu. Esikhathini ingxenye uchungechunge lwesibili "Kubi Nastia" usikhombisa yinkosana namandla ahlukene: kanye nangemva kokuba ezamile wahluleka ukuthola lulwimi ezivamile Anna, yena, nokho, uthola injabulo nomakhelwane ebukekayo - Princess Lisa, okuyinto kuyafana akwenzayo, it has a uhlamvu sasivumela esiqinile futhi engumthengisi.
Phambili besilisa ochungechungeni TV "Kubi Nastia" Daniyeli Ukwesaba, owawusekelwe ekuskrini isithombe Baron uVladimir Ivanovich Korf. Lokhu uhlamvu ezithakazelisa kakhulu ngomqondo ngokwengqondo mhlawumbe. Lokhu uhlamvu impikiswano kunawo wonke ifilimu: ekuqaleni kubonakala sengathi umuntu ohloniphekayo, kodwa nokho kakhulu, ezinzima futhi unonya.
Ngaphansi ibhaxa yena liphazamisa injabulo yabanye, kunalokho yena babeziphatha ngokuziphatha kuka-Anna, uyise njalo obudinekile nge Antics zabo. Ikakhulukazi ezithakazelisayo kwaba kwemvelo akhe aqhubekayo: endodeni ambalwa baphikise kanye nobugovu, wenza ngokwezwi nezwi phambi iphenduka ibe uhlamvu mnene lothando uyakwazi wokuzidela, imizwa olungenabugovu uzimisele engozini ngenxa ladies udumo kwesithunzi nokuhlonipheka kwakhe. Nokho, lapho kufanele kuphawulwe ngokushesha ukuthi Wladimir seyenziwe izilaleli njengoba uhlamvu omuhle kusukela ekuqaleni. Ngokuvamile, kubonakala sengathi Pechorin - indoda eqinisweni ngomusa, ethembekile, kodwa ukuphila kancane shabby. Ukwesaba lidlulisela ngokuphelele umfanekiso uhlamvu wakho esikrinini, ukuwudlala emasikweni best of Russian ifilimu zabuna.
Phakathi kweminye abadlali endaweni yokuqala kufanele kwenziwe, yebo, Tsesarevicha Aleksandra Nikolaevicha, ikusasa uMbusi abadumile, umkhululi we serfs. Esikhathini uchungechunge "Abampofu Nastya", abadlali kanye izindima eyayibonakala ngokulinganayo basakaza phakathi abadlali abasha futhi abaculi lesikole Soviet, futhi ukhunjulwa umfanekiso Prince Andreya Dolgorukogo, eyadlalwa Anton Makarska. Lokhu uhlamvu is zihlukaniswa romance yayo engavamile, okuyinto Nokho, kamuva kwaholela eqinisweni ukuthi wayelahlekelwe emizweni yabo.
Neziphawulekayo nesizinda izithombe, kanye nabalingisi we plan yesibili, Nokho, okuyinto, khumbula umdlalo omkhulu Izıhlabane zihlaba. Abaningi kwezahlakalo lapho bazibandakanya injabulo effervescent ezahlukene, amahlaya omuhle. Yingakho izinhlamvu njengo- umphathi oyinhloko ifa (indima eyadlalwa D. Shevchenko) , umholi yezikhulu wesifunda (A. Filippenko) kahle futhi abathandwa izethameli.
Futhi kufanele ukhulume mayelana nezinye izinhlamvu female ku telenovela. Ngokusho ngempendulo izethameli, lo wakhumbula kakhulu futhi abathandwa uNatasha Repnin - udadewabo Michael - by E. Klimova. Ubuhle Heroine, ukuba nethemba lokuhle wakhe ongapheliyo, uhlamvu ethakazelisayo, umuzwa elimangalisayo amahlaya ngokushesha yabakhanga izethameli. Ngaphezu kwalokho, ukuba umdlali amahle kakhulu, stylish nenhle. zokubhukuda wakhe kanye nokubukeka kwakungamadodana umhlobiso eyinhloko uchungechunge.
Abaningi wathandana Lisa Dolgoruky (indima wenza A. Tabanina): Princess isibindi, nokuzimisela kwakhe nokuphikelela ifeze yabo niyenzé omunye izinjini eyinhloko ngesakhiwo. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe umfanekiso umakoti Alexandra - Princess Mary (adlalwa M. Aleksandrova): Umusa nokupha kwakhe, ukwethembeka kanye ukuthatheka abathandwa bonke abalandeli yochungechunge.
TV ewuchungechunge "Kubi Nastya", abadlali kanye izindima sezihlonziwe futhi ekhethiwe nokulindela ezingokoqobo emlandweni, has a ukwakhiwa kunalokho ezithakazelisayo lelandzisako kwengoma. Evamile, lonke icebo kungenziwa ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: i-65 iziqephu lokuqala abazinikele uthando unxantathu (Vladimir, u-Anna, Michael) kanye nokudalulwa ukuhlobana okukhona phakathi kwalaba balingiswa abathathu. Lo mugqa nzima yokuthi umlingisi losemcoka uhlala inqaba, okuyinto Yiqiniso, igcina izilaleli ingaqiniseki kube yileso sikhathi esivusa amadlingozi lapho ekugcineni baxoxe ngesikhathi Duel Korf futhi Repnin, wathola eside elindelwe inkululeko yabo ezandleni umnikazi wabo impikiswano.
Okuhambisana ngesivinini ethuthuka okuthiwa umugqa Sasebusika (i-emperor kudlalwa W. Wierzbicki, iNdlovukazi - A. Bondarchuk), ezihlobene ukuthandana Tsesarevicha Aleksandra kanye nobuhlobo bakhe nengoduso yakhe, abazali, kanye nemizamo yakhe wazi ngandlela-thile ngokwabo ngaphansi ubuholi ohlakaniphile umeluleki yayo unomphela, imbongi V Zhukovsky (Kalyagin).
Ingxenye yesibili yochungechunge ithelevishini
Ingxenye yesibili yochungechunge ilahlekelwa nokuqina yayo: ngokoqobo ngaphakathi ezimbili uchungechunge zonke emi impikiswano e Korf Manor, kanye Sasebusika zaba zimbi. Njengoba phambili kwenziwa umzamo ukwakha isimiso esisha ubudlelwano phakathi lezinhlamvu esikhundleni ubudala. Lokhu kusebenza kuzo zombili izinhlamvu ezinkulu nezincane. UVladimir uzama ukwakha ubuhlobo no-Anna, uMichael uthola uthando olusha, futhi zikhula Alexander uzama ukulungisa amaphutha ubungqabavu bobusha bakhe lina futhi kuneziphepho, ukulondoloza ozithandayo zakhe zangaphambili lolaka zombusi.
Lo mugqa uthando is kwahambisana by indaba kunalokho eliyingozi ku Dolgoruky umndeni (indima eyenziwa: E. Vitorgan - inhloko yomkhaya, O. Ostroumova - nomkakhe, L. Kutepov - the Indodakazi encane UZandile) lapho ukukhohlisa, ukuphinga, ukubulala kanye ubuthi ulandela elilodwa omunye parallel ukudalulwa izimfihlo umndeni abesabekayo i engumlanjwana ingane futhi ubugebengu Princess. Ezinye kwehlukana ngesakhiwo Nokho, akazange konakalisa umuzwa wokubuka lokhu nephrojekthi ethokozisayo, njengoba ochungechungeni TV "Kubi Nastia". Abalingisi kanye izindima ezazibhekwa lokhu kubuyekezwa.
Isikrini lithathelwe amanoveli. TOP-10
Umlingisikazi Meril Strip: Filmography, izindima umhlabeleli
Fiction mayelana isikhala - kuhle!
Le filimu "Amehlo Vala Wide": abalingisi, izindima, ukubuyekezwa
Umbala 'obomvu okwegazi Peak ". Scene Incazelo Gothic yezinganekwane Guillermo del Toro
Hyu ULori: kusuka amahlaya ukuba izinto kalula. Ukubuyekezwa kwe imisebenzi engcono umlingisi
Fibrous yezindlala polyp endometrial
I-ASUS K52F I-Notebook Review: incazelo, imininingwane kanye nokubuyekezwa
Izakhiwo e ucabanga Enterprises: Ngokwezifiso
Olungaphambili lwesonto ukwahlukanisa Penoplex: ukukhweza ubuchwepheshe
Ihhotela "Olga" (Sheregesh): ngezibuyekezo nezithombe
Abalobi Baby Soviet
Parenchymal jaundice: izimpawu, izimbangela, uphethwe
Lungisa ukhukhamba okumnandi futhi ezinoshukela pickled
Kuhle Thriller-Korean. Ama-Movie-Adventure-Korean
Customs iziqondiso - odinga ukukwazi ngesikhathi umngcele